Weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xerada XALANE - Caasimada Online
Home Warar Weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xerada XALANE
Weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xerada XALANE
Muqdisho (Caasimada Online) – Weerar madaafiic ah ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, oo ah halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamka iyo hay’adaha caalamiga ah.
Ilo-wareedyo ku sugan xerada ayaa Caasimada Online u sheegay in qiyaastii 6 hoobiye ay kusoo dhaceen gudaha xerada.
Goobjoogayaal ku sugan Xalane ayaa sidoo kale Caasimada Online u sheegay in hoobiyayaashu ay gaysteen khasaare hantiyeed. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya khasaare isku jira guryo iyo baabuur oo ay sababeen madaafiicda so dhacday.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka.
Naga filo faah-faahin dhowaan, Inshga Allah.